भिडियो: यस्तो बन्यो गुल्मीमा शुटिङ गरिएको तीज गीत – मुखैले ठीक्क बनायौ – Gulmiews
भिडियो: यस्तो बन्यो गुल्मीमा शुटिङ गरिएको तीज गीत – मुखैले ठीक्क बनायौ
August 6, 2015 Sanju Kauchha
चर्चित गायीका मञ्जु पौडेल र गायक सन्तु थापाको स्वरले सजिएको “मुखैले ठिक्क बनायौ” नामक तिज गीत बजारमा आएको छ ।
आषिश म्यूजिक प्रालीले बजारमा ल्याउएको गित चर्चित शब्द संकलक नेत्र अर्यालको शब्द र खेम सेञ्चुरीको लय रहेको छ ।
गीतमा चर्चित डान्सर शंकर बिसी र डान्सर रश्मी तामाङ्द्वारा अभीनय गरिएको उक्त गीतको नृत्य निर्देशन शंकर विसिले गरेका छन् भने छायांकन राजेश घिमिरेले गरेको गायक सन्तु थापाले वताए । केहि दिन पहिले गीतको भिडियो गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास धागिथुम स्थित भगवती मन्दीरमा छायांकन गरिएको हो ।
हेरौँ सन्तु थापा र मन्जु पौडेलको नयाँ तीज भिडियो:
Related Posts	चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो र...	October 13, 2016	करिब ६०० ले चन्द्र भण्डारीको टिका ग्रहण गरे (भिडिओ समाचार)...	October 12, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	पहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन